Elu nsogbu Pu ụfụfụ ịgba asụ Ụfụfụ igwe-eziga ka USA - BOBO Machine Co., Ltd.
Elu nsogbu Pu ụfụfụ ịgba asụ Ụfụfụ igwe-eziga ka USA
BDF-II pneumatic elu nsogbu Pu ụfụfụ spraying igwe bụ imewe maka saịtị na-arụ ọrụ, n'ụzọ ziri ezi e ji atụ ihe, ọbụna agwakọta, ibughari na obere Ọdịdị na itule nke na-eri na arụmọrụ. The HP ụfụfụ spraying igwe na ọtụtụ-eji n'ihi na mgbidi, ụlọ, friji, na igbe, anwụrụ mkpuchi nzube.
1-	Pneumatic moto
The pneumatic moto ịmụta ọhụrụ direction-mgbanwe abụọ direction ọrụ, ka ndị ọzọ mụ arụmọrụ tụnyere electric otu, adabara mgbagwoju anya saịtị na-arụ ọrụ ọnọdụ.
2-	High nkenke hà mgbapụta
3-	Main igwe kpo oku usoro
Isi igwe ịmụta iche iche aluminum okpomọkụ, onwem na ike kpo oku mmanya n'ihi na mma kpo oku ike, adabara ala okpomọkụ ọrụ na oyi. The okpomọkụ akara usoro na nọmba ngosi, na atụ na bufee nchedo usoro ịchịkwa okpomọkụ kpọmkwem.
4-	Sooks kpo oku usoro
The abụọ sooks na-ewe iwe iche iche na ọhụrụ ọbọp n'ime kpo oku technology, ọ bụ ihe ndị ọzọ mma karịa omenala otu, iji hụ na ihe onwunwe nwere kacha mma okpomọkụ na viscosity n'ihu agwakọta na spraying.
The GZI usoro ịgba egbe bụ ndị kasị ewu ewu nlereanya na 10 afọ ahịa ude. Nke a na-nọgidere na-enwe na ala na-eri maka anụ arụmọrụ. Karịrị 20,000 iberibe dị otú ahụ ịgba egbe e ji mee ihe karịa ihe 36 mba na ezi nzaghachi.
The ejikọta sooks na-eji jikọọ na kpo oku sooks ịgba egbe, nke na-mere si elu nsogbu roba sooks. Na njikọ sooks, ọrụ nke ịgba egbe ga-ìhè na-adaba adaba .
The kpo oku sooks na-eji ikpo akụrụngwa n'oge sooks eru tupu spraying, nke nwere ike na-nri okpomọkụ nweta ezi-asụ Ụfụfụ N'ihi. Otu na-esetịpụrụ kpo oku sooks gụnyere abụọ sooks maka poli na ISO, na kpo oku waya, akara cable n'ime, a ga-awa ọnụ na igwe dị ka ọkọlọtọ nhazi. Ọkọlọtọ ogologo bụ 15 mita ogologo, nke ike-akp ka kwa gị chọrọ.
The ịgba ụfụfụ igwe adịghị \_ 't kwadebe ihe tank maka obere ngwa. Ya mere nri nfuli bụ mkpa inu elu ihe si nnukwu ígwè drum maka na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. All ndị a mgbapụta bụ home ka ya na àgwà akara iji hụ na ogologo oge mụ ọrụ.
Anyị Testing ụlọ nyocha
Machine na uka mmepụta ịzọpụta na-eri na-belata gị price. Na igwe na ngwaahịa maka ngwa Mbupu.
The isi akụkụ na-arụpụtara site anyị machining center maka mma àgwà akara na na oge Mbupu.
Previous : BOBO ọgba tum tum kwuru na-eme ka igwe ZIPỤ TO Pakistan
Osote : Gburugburu corrugated metal anwụrụ maka posttension anwụrụ Ndinam na UAE corrugated metal anwụrụ igwe, gburugburu corrugated anwụrụ igwe, posttension anwụrụ Ndinam igwe